‘पायकपर्ने स्थानमै स्थायी राजधानी बनाउने अभियानमा छौ ं’ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / ‘पायकपर्ने स्थानमै स्थायी राजधानी बनाउने अभियानमा छौ ं’
‘पायकपर्ने स्थानमै स्थायी राजधानी बनाउने अभियानमा छौ ं’
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता January 31, 2018	0 248 Views
प्रदेशसभा सदस्य बर्दिया
सरकारले प्रदे शका अस् थायी मुकाम तो के र प्रदे श संरचनाको कार्यसञ्चालनलाई अघि बढाएको छ । पाँच नं. प्रदे शका सदस् यहरुले शपथ लिएर पहिलो बै ठकको प्रतीक्षा गरिरहे का छन् । यही माघ २१ गते बुटवलको उद्यो ग वाणिज्य संघको हलमा प्रदे शसभाको पहिलो बै ठक हुदै छ । प्रदे श प्रमुखले बै ठक आह्वान गरिसके को अवस् थामा पहिलो बै ठक, प्रदे श सरकार गठन र स्थायी राजधानीका विषयमा बर्दियाबाट निर्वाचित प्रदे शसभा सदस् य कविराम थारुसंग युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा प्रस् तुत गरिएको छ । –सम्पादक
प्रदे श सरकार कहिले बन्छ ?
भर्खरै प्रदे शसभाको पहिलो बै ठक आह्वान गरिएको छ । प्रदे श प्रमुखले माघ २१ गते प्रदे शसभाको पहिलो बै ठक बो लाउनुभएको छ । बै ठकमा छलफल हो ला कहिले बनाउने भन्ने विषयमा पनि । एमाले को तर्फबाट पार्टीको संसदीय दलको ने ता हामीले शंकर पो ख्रे ललाई चुनिसके का छौ ं । मतको हिसाबले पाच नम्बर प्रदे शको मुख्यमन्त्री शंकर पो ख्रे ल नै हुनुहुन्छ । मन्त्रिमण्डलका विषयमा छलफल भइरहे को छ । माघ २४ गते राष्ट्रियसभा निर्वाचन हु“दै छ । निर्वाचनपछि नै प्रदे शको सरकार बन्ने छ ।
माघभित्रै आउला ?
माघभित्रै सरकार बनाउने प्रयास हुन्छ । के ही व्यवधान भएन भने फागुनसम्म जादै नांै  ।
शपथ लिइसके पछि सांसदहरु मन्त्री हुने दौ डधुपमा छै नन् र ?
शपथ लिएपछि तपाइले भने जस् तो दौ डधुप त छै न । मन्त्री हुने पनि मापदण्ड तो किएको छ । सबै का सबै सांसदहरु मन्त्री हुने कुरै भएन । त्यसै ले आ–आफनो क्षे त्रमै हुने गतिविधिहरुमा व्यस् त भइरहे को अवस् था छ । जनताकै काममा हामीहरु क्रियाशील भइरहे का छौ ं । सरकारको तयारीका लागि सांसदहरुको तर्फबाट खासै तयारी भएको छै न । सामान्यतया छलफल, लबिङको कुरा त हुन्छ नै  । तथापि बर्दिया जिल्ला पिछडिएको जिल्ला हो  । पा“च नम्बर प्रदे शको पश्चिम पुछारको जिल्ला पनि हो  । आदिवासी जनजाति थारुहरुको जिल्ला पनि हो  । यसर्थ बर्दियालाई सानै भए पनि अब हुने सरकारमा सहभागिता चाहिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले आ आफ्नो माध्यमबाट भनिरहे का पनि छौ ं ।
दौ डधुप नभए पनि मन्त्री हुने लाइनमा तपाइ पनि हुनुहुन्छ ?
हो  । मे रो पनि दाबी छ । किनभने मै ले माथि पनि भनें बर्दिया जिल्ला पिछडिएको जिल्ला, थारुहरुको बाहुल्यता भएको जिल्ला भएको हुनाले र प्रदे श नै जनजातिहरुको बाहुल्य क्षे त्र भएको हुनाले यो क्षे त्रको जनप्रतिनिधिका हिसाबले मे रो दावी स् वाभाविकरुपमा हुनुपर्छ । सो ही अनुसार मै ले त्यो दाबी जाहे र गनेर् हो  ।
व्यक्तिले चाहे र हुदै न हो ला, पार्टी र गठबन्धनप्रति लविङ गर्नुभएको छ ?
पहिलो कुरा म व्यक्ति मात्रै हो इन, यसक्षे त्रको प्रतिनिधि हु“ । जनप्रतिनिधिलाई व्यक्तिको रुपमा मात्रै बुझ्नुह“ुदै न । तथापि मै ले पनि शीर्ष ने ताहरुस“ग छलफल पनि गरे को छु । ने तृत्वले बर्दिया छलफलको विषय बने को छ भन्नु भएको छ । आशा गरौ ं जनताको भावना सबै ले बुझ्नुहुने छ ।
पाच नम्बर प्रदे शको स् थायी राजधानी कहा हुन्छ ?
सरकारले जसरी पा“च नम्वर प्रदे शको अस् थायी राजधानी तो क्यो त्यसप्रति बर्दियाबासीका तर्फबाट हामीले प्रतिक्रिया दिइसके का छौ ं । त्यो हामीलाई मान्य हु“दै न । सरकार आफै ले पनि मुकाम तो क्नुअघि विभिन्न अनुगमन, अध्ययन गरे कै हो  । अनुगमन, अध्ययन टो लीले प्रतिवे दन पनि दिएकै छ । तर ती सबै प्रतिवे दनलाई लत्याएर सरकारले मनो मानी ढंगले निर्णय ग¥यो । पहिलो बिरो ध बर्दियावासीको त्यसमा हो  । आफै ले बनाएको सरकारी संयन्त्रले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन नगनेर् ले जनताको कुरा सुन्ने कुरै भएन । सो ही अनुसारको निर्णय भयो  । त्यो निर्णय गनेर् संवै धानिक अधिकार पनि सरकारलाई थियो  । त्यसो नहुनु पनेर् हो सरकारले गरिहाल्यो  । हामी बर्दियाका जनप्रतिनिधि र जनताले त प्रे स विज्ञप्तिमार्फत र पत्रकार सम्मे लन नै गरे र सरकारी निर्णयको बिरो ध गरे का छौ ं । त्यो निर्णय हामीलाई मान्य छै न । तर पनि त्यसलाई सच्याउने अधिकार प्रदे शसभालाई छ । अबको बाटो भने कै प्रदे शसभा हो  । त्यसो हु“दा त्यो बाटो अवलम्बन गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्न हामी प्रदे शसभा सदस् यहरुले शपथ पनि लिइसके का छौ ं । आशा गरौ ं अब प्रदे शसभाबाटै सबै लाई पायक पनेर् स् थानमा पा“च नम्बर प्रदे शको स् थायी राजधानी तो किने छ ।
पायकपनेर् भने को कहा हो ?
पायक कहा“ पर्छ भन्ने कुरा त भूगो ल हे रे भइहाल्यो नि । सरकारी प्रतिवे दनले कहा“ भने को छ ? हामी बर्दियाबासीहरुको माग भने को दाङ स् थायी राजधानी हुनुपर्छ भन्ने हो  । हामीले सो ही अनुसार लविङ पनि गरे का छौ ं र बिरो ध र दबाब पनि ।
सरकारले अस् थायी तो के कै ठाउ पनि त्यति टाढा त छै न नि ?
तपाइ दे शको कुरा गर्नुहुन्छ कि प्रदे शको ? पा“च नम्बर प्रदे शको सबै लाई पायक पनेर् ठाउ“मा छ अहिले को अस् थायी राजधानी ? छै न । तर पनि सरकारले तो किसक्यो  । कार्य सञ्चालनका लागि तो के को थियो  । त्यसको कार्यान्वयन पनि भइसके को छ । अब सबै लाई पायक पनेर् ठाउ“मा राजधानी चाहिन्छ । दो स्रो कुरा रुपन्दे ही राजधानी हुने नहुने भन्नुभन्दा पनि पा“च नम्बर प्रदे श जनजातिहरुको बहुल क्षे त्र हो  । पिछडिएका क्षे त्र, वर्ग, समुदाय एकातिर अनि उनीहरुकै लागि निर्माण गरिएको संरचना चाहि‘“ अकोर् तिर हुनुहु“दै न । कानूनमा मात्रै हो इन, बर्दियाली जनता त्यो कुरा अब व्यवहारमा हुनुपर्छ भन्ने मा छन् । हामीले बर्दियामै राजधानी चाहिन्छ पनि भन्ने थियौ ं नि तर सबै लाई पायक पर्छ कि पदैर् न ? के अस् थायी राजधानी तो किएको रुपन्दे ही राजधानी हुन्छ भने बर्दिया नहुने भन्ने कतै छ ? हामीले त्यो पनि भनिरहे का छै नौ ं । प्रदे शको मुकाम पा“च नम्बर प्रदे शका सबै लाई पायक पनेर् स् थानमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो  ।
आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानको कुरा त पाच नम्बर प्रदे शको जुन जिल्ला गए पनि रहला नि, दाङ वा बर्दियामा मात्रै हुने हुन्छ र ?
त्यो त सबै ले आत्मसात गर्नुप¥यो नि । भन्ने बे लामा बहुसंख्यक जाति, जनजाति भन्ने । पिछडिएको जाति, वर्गलाई नै अगाडि बढाउन सकिएन भने संघीयताको अवधारणाको के अर्थ भयो र ? हामीले संघीयता ल्याएकै पिछडिएका वर्ग, क्षे त्र, जाति, समुदायका लागि हो इन र ? त्यसकारणले यी वर्ग, समुदायका लागि हो भने व्यवहारमा पनि त्यही अनुसार काम गर्नुपर्छ र त्यसको उपयुक्त स् थान दाङ हो भन्ने कुरा हामी बर्दियावासीले गरे का हौ ं । रुपन्दे ही भूगो लको हिसाबले पनि पूर्वी कुनामा छ । जुन भारतीय सीमा नजिक पनि छ । म फे रि पनि के कुरा दो हो ¥याउन चाहन्छु भने सरकार आफै ले पनि प्रदे शको सम्भावित राजधानी कहा“ हुनसक्छ भने र अध्ययन पनि गरे कै हो  । त्यो अध्ययन टो लीे ले सबै भन्दा उपयुक्त दाङ भने को पनि थियो  । त्यही टो लीको प्रतिवे दन कार्यान्वयन भए भइहाल्यो नि । अझ हामी पश्चिम क्षे त्रका लागि नजिक हुने थियो भन्ने नै हो  । भएन त्यसो भएकाले हाम्रो बिरो ध, दबाब सिर्जना गरे का हौ ं । यो जारी नै छ ।
सम्भव छ त अब स् थायी राजधानी दाङ ल्याउन ?
सामान्यतयाः सम्भव दे खिन्न । किनभने स्थायी राजधानीका लागि प्रदे शसभाको दुई तिहाइ बहुमतको परिकल्पना संविधानले गरे को छ । त्यो दुई तिहाइ जुट्ने अवस् था छै न । तर हाल सरकारले तो के कै ठाउ“लाई पनि स् थायी बनाउन पनि दुई तिहाई चाहिएला नि त्यो पनि त सम्भव छै न नि । सधै अस् थायी भएर पाच नम्बर प्रदे शलाई कमजो र बनाउने कि स् थायी राजधानी बनाउने दिशामा अघि बढ्ने ? त्यसो हो भने सहमतिमा पूर्वाधारयुक्त र सबै लाई पायक पनेर् स् थानमा स् थायी राजधानी तो के र यो प्रदे शको विकास र समृद्धिलाई अघि बढाउनु नै हामी सबै को हित हुन्छ । म र बर्दियावासीहरु त निकास निकाल्ने तर्फ दबाब सिर्जना गरिरहे का छौ ं । अन्य जिल्लाका प्रदे शसभा सदस् यहरुलाई पनि कन्भिन्स गनेर् काममा हामी लागिरहे कै छौ  । अन्तिम अवस् थासम्म पनि हाम्रो लडाइ“ चल्ने छ । सरकारले रुपन्दे ही सबै को पायक पनेर् ठाउ“ हो इन भन्ने पनि बुभे mकै छ । तर उसले जानीजानी एउटा कुनामा लगे र अस् थायी राजधानी राख्ने निर्णय पनि गरे को छ । खासगरी यो ने पाली कांग्रे सको चालबाजी हो  । उसलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने पायक पनेर् ठाउ“मा राख्दा यो पा“च नम्बर प्रदे शमात्रै हो इन, सिंगो राष्ट्र समृद्धितिर जा“दै छ । त्यसलाई रो क्न, विथो ल्न र अस् िथरता सिर्जना गर्न जानीजानी पायक नै नपनेर् ठाउ“मा मुकाम तो क्ने काम गर्नलाई सरकारलाई प्रे रित गरे को स् पष्ट छ । राजधानीकै लडाइ“मा जनप्रतिनिधि र जनता लागुन् जसले विकास भन्दा पनि लडाइ“, वै मस् यता फै लियो स् भन्ने मा कांग्रे स र अहिले को सरकार लागे का छन् । त्यसको हतियारको रुपमा पा“च नम्बर मात्रै हो इन, धे रै जसो प्रदे शमा जनभावनाविपरीत मुकाम तो क्ने काम भएको छ । हामी यसलाई चिरे र अघि बढ्ने र वास् तविक संघीयता कार्यान्वयनका लागि लड्दै जनभावना अनुसारको विकास र समृद्धि प्राप्त गनेर् छांै  ।
पाच नम्बर प्रदे शको विकास र समृद्धिका लागि के गर्नुहुन्छ ?
पाच नम्बर प्रदे श भने को बहुसंख्यक किसान भएको क्षे त्र हो  । किसानहरु धे रै भएकाले पहिलो कुरा कृषिलाई आधुनिकीकरण गनेर् विषय महत्वपूर्ण हो  । हामी त्यसतर्फ आफ्ना नीति, कार्यक्रम, यो जना ल्याउने सो चमा छौ ं । खासगरी चक्लावन्दीको माध्यमबाट कृषि क्षे त्र र किसानहरुको स् तर बृद्धि गनेर् कुरा नै प्राथमिकतामा छ । त्यस् तै पॉच नम्बर प्रदे शमा धे रै जसो मुक्त कमै या, कम्लरी, सुकुम्वासी, भूमिहीनहरु छन् । यी सबै जनताका लागि छिटो छरितो रुपमा समस् या सम्बो धन गर्न सुकुम्वासी आयो ग बनाएर उहॉहरुलाई जमिन उपलव्ध गराउनुपर्छ । कम्तिमा बास र गासको व्यवस् था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । त्यस् तै उद्यो गहरुको स्थापना गरी रो जगारी सिर्जना गर्नुपनेर् छ । ठूला प्रो जे क्ट ल्याउनुपनेर् छ । जसले रो जगारीकै लागि खाडी पुग्नुपनेर् वाध्यतालाई अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागे को छ ।
अन्त्यमा, के ही छुटे का भए
म एउटा जनप्रतिनिधिको हिसावले मे रो क्षे त्र र समग्र पा“च नम्वर प्रदे शका जनतालाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले चुनावका बे ला जुन खालको घो षणापत्रमा उल्ले ख गरे का प्रतिबद्धताहरु छन् ती अब कार्यान्वयन गनेर् वे ला आएको छ । त्यसका लागि आम मतदाता एवं नागरिकहरुलाई सहयो गको अपे क्षा गर्दछु र तपाइ“हरुमाझ जुन खालको प्रतिवद्धताहरु हामीले गरे का छौ ं आगामी स् िथर सरकारमार्फत पूरा गनेर् छौ ं । सम्भव पनि छ ।
Previous: १४ स्रष्टालाई सम्मान गरिने
Next: फलफूल, तरकारी र जडीबुटी बजार बनाउने तयारी